Famakiana Stereotypes hanamboarana ny fiarahamonina
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Palestine » Famakiana Stereotypes hanamboarana ny fiarahamonina
Jolay 16, 2017
Toy ny mpitendry mozika sy mpamoron-kira rehetra, Bashar Murad dia manantena fa ny mozikany dia hiteraka sary sy eritreritra milamina ao an-tsain'izay maheno azy. Ary noho ny fihorakorahana miaraka amin'ireo hirany sy ny tehaka mafy ataon'ireo mpihaino mandritra ny kaonseritra nataony dia toa mahatratra ny tanjony izy.
Efatra amby roa-polo taona i Bashar, efa nanao fampisehoana hatramin'ny fahazazany. Na dia mahafinaritra ny mpihaino an'i Moyen Orient aza ny mozika, ny lohahevitra nofidiny sy ny tononkira hirainy matetika dia tsy. Ny fitovian'ny lahy sy ny vavy, ny LGBT, ny fahalalahana miteny ary ny fahalalahana misafidy dia mijanona lavitra amin'ireo lohahevitra ekena any amin'ny firenena Arabo-Silamo mpandala ny nentin-drazana.
Ho an'ny sasany Bashar dia "revolisionera Atsinanana afovoany;" amin'ny hafa, zavatra hafa tanteraka izy.
Murad dia nilaza tamin'ny The Media Line ny zava-tsarotra niainany fony izy mbola kely noho ny zavatra nandrasana taminy, sy ny andraikitra "ara-dalàna" antenaina horaisiny. Raha nilalao fiara plastika sy fiaramanidina ny namany, dia nalefany saribakoly ary niara-nipetraka tamin'ny namany vehivavy sakaizany. Ny fahasamihafana dia tsy mora na aiza na aiza, fa sarotra indrindra any amin'ireo vondrom-piarahamonina Arabo any atsinanan'i Jerosalema, izay i Murad noheverina ho olona ivelany.
Ho valin'izay, nanjary toeram-pialofana ny studio mozikan'i Bashar - sy ny toeram-piadiany; izay tsy andraisany fotsiny ireo olana izay mampiady saina ny mpifanila vodirindrina aminy, fa manao izany miaraka amin'ny fahatokisan-tena matanjaka.
Tsy toy izany foana anefa. Noteren'ny bullying i Murad hanova sekoly intelo: “Nahatonga ahy hahatsapa ho tsy mahazo aina amin'ny hoditro izy ireo; Elaela aho vao nahavita an'io, "hoy izy tamin'ny The Media Line. “Tsy eken'ny olona ny bandy manao zavatra heverina ho mahomby; mamporisika ny vehivavy tsy hitovy izy ireo fa rehefa lehilahy, dia maneso azy ireo. ”
Nandany efa-taona tany Etazonia i Bashar nianatra fampianarana tany amin'ny Bridgewater College any Virginia. Tany izy dia niaina ny fahalalahana nomeny azy tamin'ny fitaomana azy tamin'ny fomba maro, izay nahafahany nanaiky ny tenany tamin'ny farany. Izany dia nanome hery azy hiverina any Jerosalema hanao fitaomana sy fanampiana ny hafa izay toa azy ihany, tsy mitovy.
Fiverenan'i Bashar no fandresena. Nahazo ny toeran'ny olo-malaza izy, tamin'ny novambra 2016, namoaka ny horonantsary mozika voalohany an-tserasera (https://www.youtube.com/watch?v=zbjhcKpU8_E) manangona fomba fijery maherin'ny 100,000. Ilay clip dia noheverina ho manavao — ary mampiady hevitra — tamin'ny nanehoany ny lehilahy sy ny vehivavy miasa any an-tsaha izay heverina ho tsy mendrika afa-tsy amin'ny lahy sy ny vavy. Inshrah, izay miseho ho vehivavy mpamily kamiao ao amin'ny horonantsary dia nilaza tamin'ny The Media Line fa ny zava-niainany naka sary an'i Bashar dia “nahagaga” ary nampahatsiahy azy fa “misy ny hafa izay manao zavatra izay tsy fomba nentim-paharazana.”
Araka ny voalazan'i Bashar, ny hafatra ao ambadiky ny hira, mitondra ny lohateny hoe Bebe kokoa toa anao, "Mitaona ny olona ao amin'ny vondrom-piarahamonina Arabo hanaiky ny hafa amin'ny toetrany, ary hijanona tsy hanantena ny hitovian'ny tsirairay." Nilaza tamin'ny The Media Line izy fa, "Zava-dehibe ho an'ny fiarahamonina ny mandray ireo olona isan-karazany fa tsy mametraka azy ireo ambany."
Tsy nampoizina, maro ny olona manohitra ny mozikan'i Bashar, tonga hatrany amin'ny fiantsoana azy hoe manimba sy tsy maneho ny fiarahamonina Palestiniana. Tsy izany anefa, ho an'i Raed Al-Kobare, lehiben'ny Sampan-draharahan'ny Mozika ao amin'ny Ministeran'ny Kolontsaina Palestiniana.
Manakaiky an'i Inshrah, Al-Kobare dia nilaza tamin'ny The Media Line fa misy “vehivavy Palestiniana mihoatra ny dimy mitondra kamio sy bus ao Ramallah mihitsy; ary ny vehivavy Palestiniana dia mihazakazaka, milalao fanatanjahantena ary manao zava-kanto. ” Saingy nanaiky izy fa misy stereotypes sasany mihatra amin'ny firaisana hafa. “Mety hankahala izany ny lehilahy amin'ny fiarahamonina Arabo rehefa mitana andraikitra voatondro ho an'ny vehivavy ny lehilahy, hoy i al-Kobare
Bashar dia mianatra mozika ao amin'ny Rimon College any Tel-Aviv amin'izao fotoana izao, ary vao nivoaka Voices(https://www.youtube.com/watch?v=IkUL5bTZztk), hira vaovao iray momba ny fandresena ny fahaiza-manao amin'ny vondrom-piarahamonina Arabo sasany hametraka ny olona "hafa".
Ao amin'ny horonantsary, ny ampakarina nentim-paharazana hitan'ny akanjo fotsy dia lanin'ny "feo be dia be ao an-dohany izay nampidina azy." Farany, nivoaka avy tao amin'ny “fonja” nentim-paharazany izy, naseho tamin'ny fipoahan'ny loko, sy ilay feon-kira miaraka aminy, “tsara kokoa ny zava-drehetra amin'ny loko kely.”
Guitarist Ahmed Azizeh faly fa anisan'ny asa sy lohahevitra mampiady hevitra. “Mikasa ny hanova olona aho ary hampirisika azy ireo tsy hanaraka ny vahoaka intsony fa ho tena izy,” hoy i Ahmed tamin'ny The Meda Line. Amin'ny lafiny iray kosa dia nilaza i Bashar fa “mihira ho an'ny fanovana sy ho avy tsaratsara kokoa izay hifanajana sy hifaneken'ny olona tsy misy fepetra”.
Izy io dia hafatra tsara izay hita fa mahaliana.
Fiaran-dalamby mpivahiny any Afrika Atsimo, tonga ao Tanzania ny Rovos Rail
Air Guru no hany orinasa any India misolo tena ny BPPD Badung Tourism Promotions Board, Indonezia mba hamporisika ny Bali Tourism avy any India
Ireo mpizahatany tsy isaina amin'ny statistikan'ny State of Hawaii COVID-19
Ny filoham-pirenena misahana ny fizahan-tany afrikanina St.Ange dia mirary fifanakalozan-kevitra mahomby amin'ny filoham-pirenena Tanzania sy Kenya